लेख/ साहित्य Archives - Page 25 of 33 - Purbeli News
सानी अनि बुढीखोला – सुकदेव घिमिरे
सुकदेव घिमिरे मस्त निन्द्रामा छ शहर चैनको निन्द्रामा सुतिरहेछन सबै केवल उ बिउझो छे सानी । एउटा पालको टहरो भित्र चिलाउने म्याट्रेस माथी हातको शिरानी लगाएर जसो तसो निदायो , सानो भाइ शहर सबै झलमल्ल छ तर खण्डहर बनी सकेको उस्को पुरै बस्ती अन्धकारमा डुबेको छ । यहि माटो हो उन्को बुवालाइ खाने तीन दिन पछि डोजरले निकालेको क्षत बिक्षत ...
त्यो दिन अर्थात् मैले एक्काइस वर्ष पहिलाको रहस्य खुलाएको दिन । मेरो स्मृतिमा ताजै छ २०७२ असारको पहिलो त्यो हप्ता । बिस्तारै धर्ती भाँसिए जस्तो महसुस भएको थियो । अरुको लागि दिन सधै जस्तो सामान्य नै थियो । तर मेरो लागि फरक । दश बज्न दश मिनेट नै बाँकी थियो । म कोठाको ढोकामा चाबी लगाउँदै थिएँ । मोवाइलको घण्टी बज्यो । ब्यागबाट मोबाइल निकालेर मोबाइलको स्...
व्यस्त दैनिकीले नैतिक दिनहुँजसो थकित हुन्छ । परिवारलाई राम्रोसँग समय दिन सकेको छैन उसले । अब त उसलाई, घर परिवारभन्दा पनि काम नै प्रिय लाग्न थालिसकेको छ । बेलुका घर जाँदा बच्चाहरु सुतिसक्छन अनि आफू बिहान घरबाट निस्किँदा उठेकै हुँदैनन् । कसैको पिता भएर पनि पिता हुनुको महसुससम्म थिएन उसलाई । श्रीमतीको सामीप्यताको आवश्यकताले उसले एकरात निदाएकी श...
प्रेममा समर्पण होस् त यस्तो…… उनि भन्दै थिइन त्यसपछि जीवनमा मैले अर्कोलाई रोजिन ….. सुन्दर जीवनको परिकल्पना कसले गरेको हुन्न ! राम्रो लाउने, घुम्ने, पाए कारै चड्न पाए हुन्थियो । शान सँग हिड्न पाए हुन्थियो । टल्केको जुत्ता सँग हिड्दा सबैको नजर आफैतिर परोस, बोल्दा सबैका कान ठाडा ह उ न अनि हास्दा सृष्टि हासुन । आहा ! कस्तो हुन्थियो होला । केहि गरेर...
भर्खरै टिन एज टेकेका सानो बाबू घर आंगन मा फुटबल खेल्दै गर्दा आफ्नी आमा लाई देखेपछि लाडिंदै भन्न लाग्छन् - मुमा हजुर! आज साथिको बर्थडे छ। मलाई गिफ्ट किन्नलाई २ हजार रुपैयाँ जति बुवा हजुरलाई माग्दिस्यो न? पुल्पुल्याएर हुर्काउंदै गरेको सानो छोरा को माग पूरा नहुने कुरै भएन, आखिर यत्तिका सम्पत्ति कस्का लागि? आफ्नो छोराको कपाल सुम्सुम्याउदै भन्छि...
‘ओझेल’ बिमोचन, यौनको कुराले पुगेन डब्बुलाई
सञ्चारकर्मी जीवन खड्काको पहिलो उपन्यास ‘ओझेल’ बिचोचन गरिएको छ । काठमाण्डौँको कालिकास्थान स्थित सर्वनाम नाटक घरमा सञ्चारकर्मी, पत्रकार तथा साहित्यकारहरुको उपस्थितीमा उपन्यासको बिमोचन गरिएको हो । उपन्यासको बिमोचन बरिष्ठ समिक्षक समिर बाबु कट्टेल, साहित्यकार, पत्रकार तथा चलचित्र निर्देशक डब्बु क्षेत्री, सञ्चारकर्मी कला सुब्बा, प्रकाशक पुष्पराज पौडेल र ...
मनकारी मणिराम !
मणिराम श्रेष्ठ इटहरीका लागी कुनै नौलो नाम हैन । समाजसेवामा अग्रनी भुमिका खेल्दै आएका मणिराम आफैमा स्वच्छ र स्पष्ट वत्ता हुन । नेपाली काग्रेसको क्षेत्रीय सभापति मणिराम अहिले गरीव र मुसहर वस्तीका लागी भगवान हुन भन्दा फरक नपर्ला । नेपाली काग्रेसको राजनिति सँगै समाजका तल्लो तह सम्म भिजेका मणिराम अहिले चर्चा थप चुलिएको छ । तरहरा क्षेत्रमा उनको योगदान नि...
काठमाडौं । धेरै वर्षपछि आज आज अचानक भेट हुँदा कृष्ण र कुमार असाध्यै खुसी भए। अप्रत्यासित भेटले उनीहरुको मानसपटलमा बाल्यकाल चल्मलाउन थाले। बाल्यकालको साथी कृष्ण अमेरिकाबाट पिएचडी सकेर विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक भएको खबर सुनेर कुमारका आँखा खुसीले रसाए। ‘घरपरिवारको बोझले थिचिएर धेरै पढ्न सकिनँ’, कुमारले कृष्णसँग दुखेसो पोख्यो, ‘म त कृषक पो भएर बसेको छ...
‘ए बुढा, यो तीजमा तीन आनाको भए पनि तिलहरी बनाइदिन्छु भनेका हौ, तीज आउन एक हप्ता छैन, खै चालचुल गर्दैनौ तो ।’ घरको पेटीमा बसेर मकै खोसेल्दै गरेकी बसन्तीले ठट्टै ठट्टामा आफ्ना माग फेरि दोहो¥याई । पैला त रिसले कन्सिरी ताते, मुखमा गालीका शब्दहरु निस्कनै लागेका थिए, तर फेरि सोचें– हो त नि । भनेकै त हुँ यो तीजमा पक्का भनेर । ‘यो साल नक्कली सुनको तिलहरी क...
कुरा कार्तिक महिनाको तिहार ताकाको हो रे । रातीको १० बजे पछि नम्रतालाई उनको साथी सुशीलाको फोन आयो, र कुनै सम्बोधन नै नगरि निकै आक्रोशित आवाजमा शुरुमै सोधियो रे–“ओए ! मायामा विश्वास दिलाउन के शरिर नै सुुम्पनु पर्ने हो र ?” नम्रता अक्कनबक्क पर्छे र आश्चर्य मान्दै सोध्छे–“के भन्छे यो ? बौलाउन त लाईनेस् ? कस्ले के भन्यो र तलाई ?” अरु कस्ले हुन्छ र ? तला...